Yaakka Gadisisa Wajjiraa OPDO Kessatti goodhame
Uummataa Wallaga baha irra Iyyataafi wajjira OPDO dhufan Waardiyaa Addee Aster Mamo Ogganntu wajjira OPDOtiin reebamun isaan oduun achii nu ga’ee irra hubachuu dandeenye jira. Waardiyaa Addee Aster Mamo Oromoo iyyataaf dhufan Qoophee loltu kawwatanin dhidhitan kaballani ari’uu isaan wari ijan argan fi namoon dhitaman gadan dubatuu. Namoon Wallagaa Bahaa irraa dhufan kun rakkanee iyyata dhufnee maliif nu reebduu jeedhan yeroo gaafatan “Ilaalcha diina qabduu fula duratti ilee tarkanfi fudhana” ittin jeedhan. Waardiyaa ykn Egduun tarkanfi uumataa irratti fudhachuuf mirga qabdimoo? Addee Astertu kara Waardiyaa isaan uumataa reebsisan itti kakatuu lata?
Oromiyyan keessatu wajjiri OPDO lammi Oromoo hin tanene akka oganama jiru warii keessa beekan ni dubatuu, kun ammoo Oromoof gadaa gudadha. Ijoole Amaahaara OPDO keessatti Hanga Koree Hojii raawachiftutti guutan jiran kun Oromoota qulquluu mataa dha’uuf wajjira OPDO akka golggatti itti fayadama jiru. Addee Aster Mamoo Ajjaaja TPLF hunda fudhachuun kan beekman yamuu ta’uu, garuu iyyata uumataa Oromoo tokko ilee keesumesun ykn murtee keenan akka hin beeknee seenan galmesse jira. Oggannon OPDO heedun eergaa TPLF Oromoo irratti raawachisuu ala gaafi Oromoo tokko ilee furmata keenanfi akka hin beekne beekamadha. Miseensoon OPDO Oromoo qulqulu ta’aan 9,460 miseensuma isaan dhiisuf kan dirqamanf nuu miseensoon OPDO hundi Oromoo tanee utuu jiru OPDOn fi Oromiyyan kan Ogganan lammi birroo ta’uun siiri miti jeechun mormmun akka ta’ee ni dubatama. Ijoolee Amaahaara OPDO keessa jiran hojiin isaa inni gudan Oromummaa baleesuu, Ijoolee Oromoo Tapela ABO itti maxansun yaakuu, Qeebenya Oromoo samuu, eerga TPLF Oromiyya keessatti gara jabinan raawwachisuu. Addee Aster Mamo lamuman isaan Amaahaara ti kana hamatamn ilee yoo ta’ee hintala Oromoo irra kan dhalatan fi Oromiyya keessatti kan gudatan yamuu ta’uu Abban Mana isaan Oromoo qulqulu Dhaaloota Wallaga bahaa yamuu ta’an Waardiyaa isaan Namoota Wallaga Bahaa irra dhufan kana reebuun erga malii qaba lata?
Yeroo amma kana OPDOn rakko Uummanii Oromoo qabu fi haalaa Habashoon Oromoo irratti dulaa jira hubachuun OPDO heedun gara Uummataa gooruf murtefatan akka jiran dubatama jira. Tigiroon qabeenya Uummataa samachuun yeroo biyya baaqata jiran, fkn Getachew Belay ,Arkebe Equbay , Getachew Equbay, G/ Gazai Abera, Kefyalew Azeze, Atakliti Hagos, kana OPDOn fillanno isaa Uummataa bira gore Tigree kuufa jirtu fi Amaahaara anggooti deebi’uu yaaltuu of irra qabudha kan jeedhan heedudha. Kun yaada miseensoota OPDO Oromoo qulqulu ta’aan yamuu ta’uu lamii Amaahaara warii ta’aan miseensoon OPDO ammoo OPDO takalan kuufisan Amaahaara Anggoo qabsisuuf OPDO keessatti of ijaraa akka jira ibsama. OPDOn bala badinsa irra of hambsuuf Oromoo ilee garbuma siirna Miniliktti akka hin deebineef Ijoolee Amaahaara OPDO keessa jiran of keessa qulquleesun amma ta’uu qaba.
Gaafin Oromoo Yeroo amma kana dhaabileen Oromoo hundi tokko akka ta’aan gaafacha jiru. Sababin isaa Ijoolee Habashaa Siirna Minilik deebsuuf yaalan hundi Shabiyyan deggeraman TPLF/OPDO baleesuuf dhadacha waan jiranf. Kara bira ammoo dhaabilee Oromoo biyya ala jiran haala dure tokko malee walti dachaa’uuf mari’acha jiru, tokkumma kana keessatti OPDOn ilee akka hirmatuuf wali gala jiru. Dhaabileen Oromoo akka tokko hin tanef dhibba diini irratti goodhu hunda irraa anudhan ABO, WFDO, OBK, ODF, OPDO kkf hundi lafa dhiyootti tokko ta’uu jedhame abidatama. OPDO keessa kan jiran ijooleen Amaahaara ammoo tokkummaa Oromoo kana gufachisuuf waan hunda xaxaa jiru. Olola fi waldhabdee OPDO Oromoo qulqulu ta’aan irratti adeemsisaa jiru, OPDOn ilee kana beekuu qabu. Siyyasa irratti wal dhabbun jibinsa barabaraa miti kanaafu Dhaabileen rakko Oromoo hikuu barbadan hund wali dhabdee xixiqoo dhisan tokkumman Oromoof hojeechuu qabu.